Ebu Yijie R-99 Esịtidem mmako akpụzi Hapụ Ukwu Series01
Mejupụtara: metal ncha dabeere ngwakọta nke sịntetik surfactant Mpụga echiche: ọcha ntụ ntụ ma ọ bụ ahụ Nchekwa oge: afọ abụọ Ngwugwu: Mejupụtara Kraft akwụkwọ kpara akpa akpa Net Arọ: 25 n'arọ / akpa ọdabara Rubber Type Natural roba (NR), butadiene roba (BR ), Styrene-Butadiene Rubber (SBR), Isoprene Rubber (IR), Neoprene Rubber (CR), Butyl Rubber (IIR), EPDM, chlorosulfonated polyethylene roba (CSM), Fluororubber (FKM), nitrile roba (NBR) na recycled roba nwere ike etinyere na taya a ...
Aha: Acrylates / C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer Carbomer2020 bụ ihe jikọrọ njikọta polyacrylic acid copolymer. Ọ nwere ogologo viscous eruba onwunwe, na-enye ndị magburu onwe ndim na suspending ike karịsịa na surfactant usoro na ụdị sachaa doo anya gels. NM-Carbomer2020 nwere ike ide mmiri ngwa ngwa mana jiri nwayọ na-agba mmiri, na-ekpughe na ogo pere mpe. Njirimara a na-eme ka ọ dị mfe ịgbasa na mgbapụta na njikwa na usoro n'ihi ntakịrị viscosity dị ala tupu neutralizati ...
Aha: Carbomer996 Carboom996 Carbomer 996 Carbopol996 bụ polyacrylate polymer jikọrọ obe. A na-eji ya dị ka onye na-emezi ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa, nke nwere ike inye nnukwu viscosity, ọmarịcha ndim na ịkwụsịtụ arụmọrụ na obere usoro. Ọ na-ọtụtụ-eji O / W lotions na creams dị ka a mma suspending gị n'ụlọnga. Njirimara na Uru Njirimara obere oge Njirimara High viscosity High suspending, thickening and stabilizing ikike Akwadoro Ngwa Ngwa ntutu ntutu gel Moisturi ...
Aha: Carbomer 981 Carbopol 981 Carbomer 981 Carbopol981 bụ ihe jikọrọ polyacrylate polymer. Ọ na-eme otu ihe ahụ dị ka Carbomer 941. mana ọ na-eme ka polymerized na usoro mmezi nke ethyl acetate na cyclohexane. Njirimara na Ele Anya Pụrụ iche ogologo eruba onwunwe Ukwuu oru oma na agafeghị oke na ala ịta. Akwa doro anya Akwadoro Ngwa Ngwa lotions, creams na gels Clear gels Ọnọdụ ionic usoro Gukpụrụ Ntuziaka recommendeddị usoro ọgwụgwọ a tụrụ aro na 0.2 ~ 1.5%. Iji zụọ ...
Aha: Carbomer Carbomer 980 Carbopol 980 bụ ihe jikọrọ polyacrylate polymer, jikọrọ ya na usoro ihe mejupụtara nke ethyl acetate na cyclohexane. Ọ nwere ike ịnye ezigbo viscosity, ọmarịcha ndozi na ịkwụsị ọrụ na obere usoro onunu ogwu. Ngwongwo ya dị mkpụmkpụ (nke na-abụghị drip) dị mma maka ngwa dị ka gels doro anya, mmanụ gas hydrococoholic, creams. Mgbe alkali na-eme ka ọ dị iche iche, ọ na-eme ka mmiri dị ọcha ma ọ bụ gels hydrococoholic gels na creams. Atụmatụ na Uru Short flo ...
Aha: Carbomer 941 Carbopol 941 Carbomer 941 Carbopol941 bụ polyacrylate polima nwere njikọ jikọrọ ọnụ nwere ihe nwere ogologo oge na-aga na mucilage. Ọ na-enye nghọta doro anya na gels ma na-enye emulsions na nkwusioru na-adịgide adịgide na viscosity dị ala, ọbụlagodi na sistemu ionic. Carbopol941: ogologo eruba, obere viscosity, nghọta doro anya, iguzogide ion na ịkwa osisi, nke kwesịrị ekwesị maka gel na emulsion. Njirimara na Ele Anya Pụrụ iche ogologo eruba onwunwe Ukwuu oru oma na agafeghị oke na lo ...